अर्थ सबै मुद्रा – FX-परामर्शदाता
कसरी वित्तीय बजार मा व्यापार गर्न
प्रश्न र उत्तर – व्यापार
वित्तीय बजार मा व्यापार
अर्थ सबै मुद्रा
विश्व को सबै पैसा र सम्पत्ति शारीरिक देखाइएको $100 बिल – इंफोग्राफ़क
$100 – संसारको सबैभन्दा counterfeited पैसा मूल्यवर्ग. सबै भन्दा व्यापक प्रयोग दबाइ व्यापारीहरु लागि संसारमा मूल्य भण्डारण. संसारको सार्दा राख्छ.
दस हजार डलर
$10,000 – ठूलो छुट्टी लागि वा प्रयोग कार किन्न पर्याप्त. लगभग एक पृथ्वीमा औसत मानव लागि काम वर्ष.
एक लाख डलर
$1,000,000 – भुइँमा नगद वर्ग छ.
सय मिलियन डलर
$100,000,000 – प्रशस्त सबैका लागि वरिपरि जान. एक आईएसओ मा तरिकाले फिट / सैन्य मानक आकारको चटाई.
एक अरब डलर
$1,000,000,000 – एक अर्ब डलर जस्तो देखिन्छ कसरी यो छ. 10 को Pallets $100 बिल.
एक खर्ब डलर
$1,000,000,000,000 – जब तिनीहरूले शब्द वरिपरि फेंक “ट्रिलियन” जस्तो केही छ, यो को realit छ $1 ट्रिलियन डलर. दायाँ Pallets को वर्ग छ $10 अरब डलर. 100कि एक्स र तपाईं को टावर छ $1 छ कि ट्रिलियन 465 अग्लो खुट्टा (142 मीटर).
सुन र चाँदी विश्व मा सबै निवेश छन्
Demonocacy.info विश्व मा सबै सुन लेख र सबै चाँदी समर्पित छ. यो लगानी उद्देश्यको लागि संसारमा सुन र चाँदी उपलब्ध थोरै रकम छोटो सारांश छ. विश्व को सबै लगानी सुनको अनुमानित मूल्य छ $2.5 मा $ 40 / ग्राम वा 1250 $ / औंस ट्रिलियन USD.
सुन भन्दा संसारमा थप चाँदी एकदम छ, तर किनभने चाँदी एकाधिक सुन भन्दा सस्ता छ (कम भन्दा $ 20 / मा ओउंस 2017), चाँदी धेरै समय भर नष्ट मिल्यो. चाँदी पनि औद्योगिक उत्पादन मा प्रयोग गरिन्छ. सार्वजनिक उपलब्ध लगानी चाँदी राशि एक आश्चर्यजनक सानो मात्रा हो. विश्व सरकारको कुनै पनि महत्वपूर्ण चाँदी रिजर्व पकड छैन, सुन विपरीत.
अठइस – $28 ट्रिलियन आधार मुद्रा मा
पचास – $50 ट्रिलियन बैंक मुद्रा मा
यो ग्रह छ कति पैसा छ. यो हुनत सबै भौतिक नगद छैन (रूपमा माथि देखाइएको), यो भन्दा डिजिटल छ:
आधार मुद्रा बैंकहरू द्वारा आयोजित पैसा हुन्छन् (देखि आफ्नो केन्द्रीय बैंक पाउँदा बैंक आफ्नो केन्द्रीय बैंक सरकार वा कर्पोरेट बन्ड बेचिएको, पैसा निजी क्षेत्र गर्न उधारो लागि उपलब्ध छ), पैसा बैंकको Vaults भण्डार (भौतिक नगद) र मानिसहरूको हातमा नगद. यो मुद्रा एटीएम उपलब्ध छैन.
बैंक मुद्रा बैंकहरुमा निगमों र मान्छे द्वारा भण्डारण पैसा हुन्छन्, कुनै पनि समयमा निकासी लागि उपलब्ध. बैंक मुद्रा पनि मान्छे र व्यापार गर्न द्वारा बैंक बाहिर lent छ '. बैंक न्यूनतम आरक्षित आवश्यकता छ (सामान्यतया 10%) तिनीहरूले हात मा राख्नु पर्छ कि. सबैले एटीएम जाने र सबै कुरा पुल निर्णय भने, त्यहाँ बैंक मा एक रन हुनेछ.
अन्ठाउन्न $58 ट्रिलियन – विश्व मा सबै सरकार बांड को मूल्य
संसारको नागरिक किनभने आफ्नो देश सरकारको द्वारा सिर्जना ऋण को यो धेरै पैसा मा ब्याज भुक्तानी.
सरकार बांड (ऋण) मानिन्छ एक “सम्पत्ति वर्ग” किनभने बांड (कर payers) को उधारो पैसा मा ब्याज भुक्तानी. को ऋणदाता प्रमाणपत्र हुन्छ (बन्धनलाई- भुक्तानी गर्न एक प्रतिज्ञा $$$ फिर्ता + चासो) बदलामा.
सामान्यतया सरकार बांड सरकारले नयाँ व्यवस्था लेख्न सक्छ किनभने गैर-भुक्तानीको सानो जोखिम संग सुरक्षित लगानी मानिन्छ (बढ्नु & Involuntary करहरू सिर्जना) शक्ति द्वारा मानिसहरूको पैसा लिन (भारी मामलामा: वैध चोरी). नहीं लगानीकर्ताले त अनुकूल छ कि पुन भुक्तानी अर्को विकल्प / उधारदाताओं फेडरल रिजर्व छ छ “मुद्रण” नयाँ पैसा, यो मुद्रास्फीति मार्फत पैसा को क्रय शक्ति devalues ​​र लगानीकर्ताले तिनीहरूले राख्नु भन्दा फिर्ता कम हुन्छ. यो सामान्यतया सरकारको लागि विकल्प को विधि छ.
किन यति धेरै सरकार ऋण? किनभने माथि-प्रतिज्ञा नागरिकहरु गर्न राजनीतिज्ञ के तिनीहरूले गर्न सक्छन् (नहीं) उद्धार, तिनीहरूले चुनाव जीत त्यसो. Politicans जीत भएपछि तिनीहरूले प्रतिज्ञा राख्ने क्रममा आफ्नो प्रतिज्ञा भुक्तानी गर्न पैसा उधारो. अक्सर तिनीहरूले आफू र अपराध मा आफ्नो crony साझेदार अर्थपूर्ण बनाउन उधारो.
एक सय सोह्र $116 ट्रिलियन – विश्व मा सबै स्टक र कर्पोरेट बांड
कर्पोरेट बांड सरकार बांड समान छन्, तर थप जोखिमपूर्ण. धेरै ठूलो कम्पनीहरु व्यक्तिहरूलाई पैसा उधारो भन्दा टाढा कम जोखिम बोक्न– यो वास्तवमा जोखिम lowers र उधारो ब्याज दर तल ड्राइव. ठूलो निगमों पैसा निजी व्यक्तिहरूलाई तुलनामा एकदम सस्तो उधारो गर्न सक्छन्. कहिलेकाहीं कम्पनीहरु पैसा उधारो आफ्नो शेयर किन्न र स्टक मूल्य माथि धक्का, आर्थिक कम्पनी gutting गर्दा त लगानीकर्ताले अर्थपूर्ण द्वारा.
स्टक मूल्य मा निकै उतार चढाव गर्न सक्नुहुन्छ, किनभने आफ्नो मूल्य थप अमूर्त छ- मान द्वारा पी / ई निर्धारण गरिन्छ (आय गर्न मूल्य) अनुपात र पूर्वानुमानित स्टक लाभांश भुक्तानी.
दुई सय नब्बे $290 ट्रिलियन – विश्व मा सबै निजी व्यवसाय को मूल्य र रियल एस्टेट
तपाईं सम्पूर्ण विश्व किन्न चाहनुहुन्छ भने, यो आवश्यक थियो कति पैसा छ.
$180 ट्रिलियन रियल एस्टेट लागि हो
$100 ट्रिलियन दर्ता निजी व्यापार को लागि छ
$10 ट्रिलियन Extralegal संस्थाहरू लागि हो.
पैसा को यो विशिष्ट ढेर पूंजीवाद मार्फत निजी स्वामित्व र निजी उद्यम द्वारा सक्षम छ.
लोकतान्त्रिक पूंजीवाद को विकल्प मा एक नजर लिएर अघि खराब आर्थिक प्रणाली मानिन्छ छ. लोकतान्त्रिक पूंजीवाद संयुक्त राज्य अमेरिका को Founding Fathers द्वारा बढुवा थियो. केही संस्थापक हीरो कल, यसैबीच केही तिनीहरूलाई कल “बेलायत कर तिर्न चाहने होइन दास मालिकहरूले”. विकल्प तपाईंको हो.
कर्पोरेट पूंजीवाद हाल संयुक्त राज्य अमेरिका मा मूख्य सिस्टम हुन मानिन्छ.
कम्युनिष्ट सरकार सबै यो पैसा को नियन्त्रण जफत हुनेछ (व्यापार र रियल एस्टेट) आफ्नो बचत जहाँ लगानी गर्न सरकार तपाईं भन्दा राम्रो थाह छ कि आधारमा, र सरकार सबै व्यापार चलाउन र सबै अचल सम्पत्ति स्वामित्व हुनेछ.
नरक सडक सधैं राम्रो मनसाय साथ छापिएको छ. उहाँले थाह सोच्छ गर्ने मूर्खले थाह एक मूर्ख उहाँले केही थाह भन्दा धेरै खतरनाक छ.
एक $1 पद्म – विश्व को सबै संजात को मूल्य
यो कुल notional सबै संजात को विश्व मान देखाउँछ (सम्झौता फारममा क्यासिनो शैली बाजी, बैंकहरू गरेको). संजात एक खतरनाक गडबड छन्. तिनीहरूले काल्पनिक तर अझै धेरै वास्तविक हो. संजात जो तिनीहरूले मा शर्त गर्न छनौट मूल्य मा क्यासिनो शैली बाजी छन्, सम्झौता फारममा, बैंकहरू गरेको, कुनै एक द्वारा overseen (को intertwined वेब कुनै एक स्पष्ट बुझ्नुहुन्छ किनभने & संजात को गडबड).
छनोट “केही” मूल्य को, भविष्य मूल्य मा बाजी बनाउन “केही”, सम्झौता थप्न & तपाईं एक व्युत्पन्न छ. बैंक डेरिवेटिव मा विशाल लाभ बनाउन, र बबल bursts संभावना हुँदा करदाता बिल संग समाप्त हुनेछ. यो डेरिवेटिव लागि कुल कवरेज visualizes (notional). सबै कारहरुको लागि बीमा कम्पनीको कुल कवरेज समान (होइन सबै कार सबै बीमा साथ बाहिर भुक्तानी गरिनेछ).
कहिलेकाहीं बैंक आत्म-रद्द व्युत्पन्न अनुबंध गर्न. उदाहरणका: 2एक्स बैंक 2x सम्झौता प्रविष्ट गर्नुहोस्:
मूल्य माथि जान्छ भने Contract1 = Bank1 Bank2 दिनुहुन्न $ 10M
मूल्य माथि जान्छ भने Contract2 = Bank2 Bank1 दिनुहुन्न $ 10M.
यो 1000x र त्यसपछि तिनीहरूले व्युत्पन्न पोर्टफोलियो को आकार बारे प्रत्येक अन्य brag जाने.
कुनै एक साँच्चै संजात मा कसको के owes गर्ने ट्र्याक गर्न सक्नुहुन्छ, यो एक विशाल भ्रामक गडबड छ, तर यस्तो Fed Chairwoman जेनेट Yellen रूपमा unannounced घटना अचानक गर्न ब्याज दर हुर्काउन 5% धेरै सम्भावना सम्पूर्ण व्युत्पन्न प्रणाली र साथ बैंक implode थियो, किनभने Domino प्रभाव क्यासकेडिङशैलीपाना र केही बैंक संभावना व्युत्पन्न बाजी मा खराब हात छ र दिवालिया जाने.
केही मूर्ख (शायद अर्को बैंक) को दिवालिया बैंकको स्टक र सम्पत्ति स्वामित्व हुनेछ, र पनि दिवाला सामना. यो आफ्नो पैसा खींच सुरु हुनेछ बैंकहरू र सबैलाई आत्मविश्वास एक हानि कारण थियो यो सुरक्षित-रक्षा, बैंक दिवालियापन को एक क्यासकेडिङशैलीपाना प्रभाव पैदा.
$1 पद्म = $1000 ट्रिलियनबाट = $1 लाख अरबों वा $1 अरब लाखौं
को लिक्विडिटी पिरामिड
को लिक्विडिटी पिरामिड जोखिम र आकार को मामला मा सम्पत्ति कक्षाहरू को संगठन visualizing लागि सिर्जना गरिएको थियो. को लिक्विडिटी पिरामिड संयुक्त राज्य अमेरिका मा समयमा सिर्जना गरिएको थियो, प्रत्येक डलर गोल्ड द्वारा समर्थित थियो. सुन सबैभन्दा विश्वसनीय मूल्य को सानो आधार खेल्छ, र बिस्तारै उच्च स्तर मा सम्पत्ति कक्षाहरू थप जोखिमपूर्ण छन्. उच्च स्तर मा सम्पत्ति कक्षाहरू को ठूलो आकार उच्च कुल विश्वव्यापी notional ती सम्पत्ति मूल्य को प्रतिनिधि हो.
वित्तीय जोखिम बढ्छ रूपमा, पैसा अधिक जोखिमपूर्ण सम्पत्तिबाट सार्न tends (संजात), कम से कम जोखिमपूर्ण सम्पत्तिमा (भौतिक नगद र त्यसपछि सुन). केही जोखिम बिना छ, तर जोखिम सापेक्षित. मुद्दा अधिक जोखिमपूर्ण सम्पत्ति तुलनामा धेरै सानो शारीरिक नगद र पनि कम सुन छ कि छ, सबैलाई नगद र सुन मा हाम फाल्न चाहँदा उच्च जोखिम को समयमा एक भीड व्यापार लागि यो बनाउँछ, मूल्य माथि धक्का.
बायाँ अगाडि मा सानो पहेंलो आयत शारीरिक रूप मा संसारमा सबै सुन छ. संसारमा सबै सुन सबै छैन “वित्तीय लगानी ग्रेड” फारम.
को $1 पद्म संजात नगद पर्खाल दूरी मा हराउँछ, किनभने $1 पद्म सबै भन्दा राम्रो विश्लेषकहरूले द्वारा एक अनुमान छ र सत्य कुनै एक संजात बजार साँचो आकार साँच्चै थाह छ.
पूर्ण यहाँ अंग्रेजी मा मूल: demonocracy.info
विदेशी मुद्रा व्यापार मा शुरुआती लागि प्रयोगकर्ता पुस्तिका
बाइनरी विकल्प को विभिन्न प्रकार